သငျဟာ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူ တဈယောကျလား ????
ကြှနျတျောတို့တှဟော မိမိကိုယျကို ဉာဏျကောငျးတဲ့သူလို့ တှေးထငျတတျကွပါတယျ။ အခွားသူမြားထကျ ပိုပွီး ဉာဏျကောငျးတယျလို့လညျး ယုံကွညျလိုကွတယျ။ ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးကို တိုငျးတာဖို့ နညျးလမျးတှေ အမြားကွီးထဲက အောကျမှာ မေးထားတဲ့မေးခှနျးလေးတှကေို ဖွကွေညျ့ပွီး ကိုယျတဈကယျ ဉာဏျကောငျးလား၊ မကောငျးလား သုံးသပျကွရအောငျ။
(၁) သငျဟာ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝက ပွသနာတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျပွီလား?
ဉာဏျကောငျးတဲ့တှကေ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝကပွသနာတှကေို ကောငျးမှနျစှာ ဖွရှေငျးနိုငျကွပါတယျ။ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝရဲ့ပွသနာဆိုတာက ဖတျစာအုပျတှမှော ပွဌာနျးထားတာမဟုတျပါဘူး။ ဘယျလိုပွသနာဖွဈလာရငျ ဘယျလိုတှဖွေရှေငျးရမယျဆိုတာက သင်ျခြာပုစ်ဆာတှလေို ဖျောမွူလာတှမေရှိတဲ့အတှကျ မိမိရဲ့ ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျးနဲ့ဖွရှေငျးရမှာပါ။ သငျဟာ ဉာဏျရညျထကျမွကျသူတဈယောကျသာဆိုရငျ ဒီလိုပွသနာတှကေို အခကျအခဲမရှိ ဖွရှေငျးနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
(၂) သငျကိုယျတိုငျခမြှတျထားတဲ့ ရညျမှနျခကျြပနျးတိုငျတှကေို အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့ပွီးပွီလား?
သာမာနျလူတှကေ မိမိရဲ့စိတျအားထကျသနျမှုရရှိစရေနျအတှကျ အခွားသူမြားပွောတဲ့စကားတှပေျေါမှာ မှီခိုနရေတတျတယျ။ ဥပမာ - နငျလုပျနိုငျပါတယျ၊ နငျ့ဘဝအတှကျ နငျကွိုးစားစမျးပါ၊ အကောငျးမွငျစိတျရှိပါ . . . . အစရှိတဲ့ စကားတှပေေါ့။ ဉာဏျကောငျးတဲ့လူတှကေတော့ ဒီလိုမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျသှားခငျြတဲ့ ပနျးတိုငျကို သခြောအောငျခမြှတျနိုငျပွီး ဒီခမြှတျထားတဲ့ပနျးတိုငျကိုလညျး မရောကျရောကျအောငျ သှားနိုငျကွပါတယျ။
(၃) သငျက ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိတဲ့လူတဈယောကျလား?
ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးဆိုတဲ့စကားနဲ့ ဖနျတီးနိုငျမှုစှမျးရညျဆိုတာ ခှဲခွားလို့မရပါဘူး။ ဖနျတီးနိုငျမှုမရှိတဲ့လူဟာ စကျယန်တယားတဈခုနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှဟော ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိတယျ၊ အမှားတဈခုကို နှဈကွိမျ ဘယျတော့မှ မမှားဘူး။ အကျဒီဆငျပွောဘူးတဲ့စကားတဈခှနျးရှိတယျ။ “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” တဲ့။ ဒီအစကားအတိုငျးပါပဲ သငျကိုယျတိုငျလညျး ကိစ်စရပျတိုငျးမှာ ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိမှသာ၊ မတူညီတဲ့ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှနေိုငျမှသာ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတဈယောကျလို ဆိုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၄) သငျဟာ ပြျောရှငျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့စုံနတေဲ့ လူတဈယောကျလား?
သငျ့ဘဝက ပြျောရှငျစရာတှမေရှိဘူးဆိုရငျ ကောငျးမှနျတဲ့အကွံဉာဏျတှေ၊ တှေးချေါမှုတှကေို သငျလုပျဆောငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီ့အတှကျကွောငျ့ ပထမဆုံးအနနေဲပ သငျဟာ ပြျောရှငျနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတဈယောကျဟာဆိုရငျ ပြျောရှငျမှုတှကေို ဘယျလိုဖနျတီးရမလဲဆိုတာကို သိရှိထားတဲ့လူတဈယောကျပါပဲ။
(၅) ဗဟုသုတနဲ့ ပွညျ့စုံနတေဲ့လူတဈယောကျဖွဈပွီလား?
ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှဟော သူတို့ရဲ့အခြိနျတှကေို မဖွုနျးတီးပွဈတတျကွပျဘူး။ သူတို့တှကေ ဗဟုသုတရှာမှီးဖို့အတှကျ Ever Ready ဖွဈနကွေတဲ့လူတှပေါ။ အိုငျစကိုငျးပွောခဲ့တဲ့ “All religions, arts and sciences are branches of the same tree” ဆိုတဲ့စကားအတိုငျး သငျမှာရှိတဲ့ဗဟုသုတနဲ့ တခွားသူမှာရှိတဲ့ဗဟုသုတတှကေို ပေါငျးစပျပွီးပိုမိုကွီးမြားတဲ့ ဗဟုသုတ သဈပငျတဈပငျကို သငျကိုယျတိုငျ ဖနျတီးပါ။
(၆) သငျ့ထကျပိုမိုတျောတဲ့သူတှနေဲ့ အလုပျလုပျနပွေီလား?
အသိဉာဏျရှိတဲ့သူတှတေိုငျးက အပွောငျမွောကျဆုံးသောသူတှေ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ကိုယျတိုငျမှာလညျး အားနညျးခကျြတှေ ရှိတတျပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ သူတို့ကိုယျတိုငျမှာလညျး သူတို့ထကျပိုတျောတဲ့၊ ပိုတတျတဲ့သူမြားနဲ့ ပေါငျးစပျပွီး အလုပျလုပျတတျဖို့လညျး လိုအပျပါသေးတယျ။ ငါကဉာဏျကောငျးတဲ့သူတဈယောကျဆိုတာတဈခုထဲနဲ့ မာနျတကျနလေို့မရပါဘူး။ ပေါငျးစညျးတတျဖို့၊ နာခံတတျဖို့ဆိုတာတှကေလညျး ဉာဏျကောငျးတတျသူတှမှော လိုအပျတဲ့ အရညျအခငျြးတဈခုပါ။
(၇) ပွသနာတှကေို ကာကှယျနိုငျပွီလား?
သာမာနျလူတှကေ ပွသနာတဈစုံတဈရာပျေါလာမှသာ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ဖွရှေငျးကွပါတယျ။ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှကေတော့ ဒီလိုမဟုတျပါဘူး။ ဖွဈပျေါလာနိုငျတဲ့ ပွသနာတှေ၊ အခကျအခဲတှကေို ကွိုတငျသိမွငျနိုငျပွီး ဒီလိုအဖွဈအပကျြမြိုး မကွုံရလအေောငျ ကာကှယျနိုငျကွပါတယျ။ တကယျလို့ ရှောငျလှဲလို့မရတဲ့ပွသနာတှပေျေါပေါကျလာခဲ့ရငျလညျး ဆုံးရှုံးမှုအနညျးဆုံးဖွဈအောငျ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးနိုငျကွပါတယျ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တဲ့ အခကျြ(၇)ခကျြမှာ သငျနဲ့ ဘယျနှဈခကျြ ကိုကျညီလညျးဆိုတာကို အဖွရှောကွညျ့ကွပါအုနျး။ သငျသာ ဒီအခကျြ(၇)ခကျြနဲ့ အနီးစပျဆုံး တူညီနခေဲ့တယျဆိုရငျ သငျဟာ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူ (တဈနညျးအားဖွငျ့ IQ မွငျ့တဲ့သူ) တဈယောကျဆိုတာ ယုံမှားသံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး
သင်ဟာ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်လား ????
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မိမိကိုယ်ကို ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူလို့ တွေးထင်တတ်ကြပါတယ်။ အခြားသူများထက် ပိုပြီး ဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့လည်း ယုံကြည်လိုကြတယ်။ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးကို တိုင်းတာဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးထဲက အောက်မှာ မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြည့်ပြီး ကိုယ်တစ်ကယ် ဥာဏ်ကောင်းလား၊ မကောင်းလား သုံးသပ်ကြရအောင်။
(၁) သင်ဟာ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀က ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီလား?
ဥာဏ်ကောင်းတဲ့တွေက တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကပြသနာတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ရဲ့ပြသနာဆိုတာက ဖတ်စာအုပ်တွေမှာ ပြဌာန်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပြသနာဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုတွေဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာက သင်္ချာပုစ္ဆာတွေလို ဖော်မြူလာတွေမရှိတဲ့အတွက် မိမိရဲ့ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းနဲ့ဖြေရှင်းရမှာပါ။ သင်ဟာ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သူတစ်ယောက်သာဆိုရင် ဒီလိုပြသနာတွေကို အခက်အခဲမရှိ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သင်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်တွေကို အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပြီးပြီလား?
သာမာန်လူတွေက မိမိရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုရရှိစေရန်အတွက် အခြားသူများပြောတဲ့စကားတွေပေါ်မှာ မှီခိုနေရတတ်တယ်။ ဥပမာ - နင်လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ နင့်ဘ၀အတွက် နင်ကြိုးစားစမ်းပါ၊ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပါ . . . . အစရှိတဲ့ စကားတွေပေါ့။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို သေချာအောင်ချမှတ်နိုင်ပြီး ဒီချမှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလည်း မရောက်ရောက်အောင် သွားနိုင်ကြပါတယ်။
(၃) သင်က ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လား?
ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးဆိုတဲ့စကားနဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်ဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ ဖန်တီးနိုင်မှုမရှိတဲ့လူဟာ စက်ယန္တယားတစ်ခုနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ အမှားတစ်ခုကို နှစ်ကြိမ် ဘယ်တော့မှ မမှားဘူး။ အက်ဒီဆင်ပြောဘူးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” တဲ့။ ဒီအစကားအတိုင်းပါပဲ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိမှသာ၊ မတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနိုင်မှသာ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လို ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) သင်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ လူတစ်ယောက်လား?
သင့်ဘ၀က ပျော်ရွှင်စရာတွေမရှိဘူးဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေ၊ တွေးခေါ်မှုတွေကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ပထမဆုံးအနေနဲပ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကို သိရှိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲ။
(၅) ဗဟုသုတနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလား?
ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကို မဖြုန်းတီးပြစ်တတ်ကြပ်ဘူး။ သူတို့တွေက ဗဟုသုတရှာမှီးဖို့အတွက် Ever Ready ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေပါ။ အိုင်စကိုင်းပြောခဲ့တဲ့ “All religions, arts and sciences are branches of the same tree” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သင်မှာရှိတဲ့ဗဟုသုတနဲ့ တခြားသူမှာရှိတဲ့ဗဟုသုတတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးပိုမိုကြီးများတဲ့ ဗဟုသုတ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပါ။
(၆) သင့်ထက်ပိုမိုတော်တဲ့သူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေပြီလား?
အသိဥာဏ်ရှိတဲ့သူတွေတိုင်းက အပြောင်မြောက်ဆုံးသောသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်း သူတို့ထက်ပိုတော်တဲ့၊ ပိုတတ်တဲ့သူများနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ငါကဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာတစ်ခုထဲနဲ့ မာန်တက်နေလို့မရပါဘူး။ ပေါင်းစည်းတတ်ဖို့၊ နာခံတတ်ဖို့ဆိုတာတွေကလည်း ဥာဏ်ကောင်းတတ်သူတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။
(၇) ပြသနာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပြီလား?
သာမာန်လူတွေက ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာမှသာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြေရှင်းကြပါတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ပြီး ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး မကြုံရလေအောင် ကာကွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ပြသနာတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အချက်(၇)ချက်မှာ သင်နဲ့ ဘယ်နှစ်ချက် ကိုက်ညီလည်းဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်ကြပါအုန်း။ သင်သာ ဒီအချက်(၇)ချက်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူညီနေခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူ (တစ်နည်းအားဖြင့် IQ မြင့်တဲ့သူ) တစ်ယောက်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး
Read times Last modified on Tuesday, 04 August 2020 16:36